Indawo eseMazantsi-ntshona - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAnthum
Intuthuzelo ezolileyo ikulindele kule ndawo ipholileyo-kude-nekhaya iseti kwindawo entle efana nelizwe entliziyweni ye-Missouri Ozarks. Zenze usekhaya kwaye usebenzise ikhitshi egcwele ngokupheleleyo okanye igrill yegesi ngelixa usonwabela imbonakalo entle kwipatio yangasemva. Sine-intanethi ye-Wi-Fi ekhawulezayo kunye nedesika ukuba ufuna ukwenza umsebenzi othile. Ngena kwi-smart TV kwaye ubukele yonke imiboniso oyithandayo ngaphambi kokuthatha umhlala-phantsi kwiibhedi ezitofotofo. Ndihlala ndifumaneka ukuba kukho into oyifunayo.
Indawo eseMazantsi-ntshona yi-duplex. Nceda upake kuphela kwicala lasekhohlo phambi kwegaraji. Elinye icala yi-Airbnb ngokunjalo kuya kubakho iindwendwe ezisebenzisa elo cala. Kukho igaraji yemoto enye ekhoyo ukuba ufuna ukupaka imoto yakho okanye isithuthuthu. Ukuba ufuna indawo yokupaka engaphezulu ngaphandle undazise kwaye singenza into. Yonke ifenitshala intsha okanye iphantse yantsha. Into yokuqala oya kuyiqaphela kwigumbi lokuhlala yi-50 "smart TV entsha kunye neplani yomgangatho ovulekileyo. Njengoko ungena kumagumbi okulala uya kubona abanxibi be-oki abaqinileyo isitulo ekoneni kunye nemithwalo eyongezelelweyo kunye nengubo kwikhabhathi. Kukho i-queen size yebhedi kwigumbi lokuhlala ngalinye kunye nesofa yokufihla ibhedi kwigumbi lokuhlala kukho izixhobo zokukhupha amanzi kwindawo yokuhlambela enendawo yokuhlamba umzimba, ishampoo kunye ne-conditioner. Zonke iisepha ziyindalo kwaye ziyi-hypoallergenic kwaye zenziwe ngokwesiko yi-Springfield. ISikhululo sokuRefill seSepha Kukho iitawuli ezitsha zokuhlambela, iitawuli zezandla kunye namalaphu okuhlamba oza kuwasebenzisa kwigumbi lokuhlambela ngalinye kunye nezongezelelekileyo kwigunjana leholo.
4.96 out of 5 stars from 183 reviews
4.96 · Izimvo eziyi-183
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi183
Ubumelwane buzolile kwaye bujolise kusapho. Ngoko ke ayifanelekanga kumaqela angxolayo okanye iziganeko. Zive ukhululekile ukuhamba okanye ukuqhuba kwaye ukonwabele indawo entle engqongileyo. I-Ozark ime ngokugqibeleleyo phakathi kwe-Springfield kunye ne-Branson iyenza ibe yindawo entle yokuhlola nokuba yeyiphi okanye zombini iindawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Anthum
Very laidback - Love to host guests, travel, explore and always looking forward to the next adventure
Andihlali kwipropati kodwa ndihlala ndifumaneka ngemibuzo, iingcebiso okanye naluphi na ulwazi malunga nommandla, njl ....
Nceda ungalibazisi ukundifowunela okanye ukundithumelela umyalezo - ndiyakonwabela ukunceda apho ndikwaziyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ozark